Rev Heads Rally wuxuu kuu kaxeeyaa kulamada multiplayer-ka maxaliga ah iyo waxbadan oo dheeri ah | Androidsis
Rev Heads Rally wuxuu halkan u joogaa inuu la yimaado xoogaa hawo nadiif ah ciyaaraha tartamada ee qaabka ugu wanaagsan ee arcade. Nooc aan ka maqanahay boqor kulan oo wax walba horay u sii qaadaya isla markaana noo keenaya wax walba oo uu metelay Super Mario Kart.
Iyo runta uu ka helo a qaybta farsamada aad u fiican si aad noo siiso dareenka ah inaan ku wadno mid ka mid ah baabuurta waalan ee aan ku ridi karno gantaallo ama dhammaan noocyada dabinnada. Haddii aad raadineyso ciyaar madadaalo leh muuqaal muuqaal dhammaystiran, Rev Heads Rally waxay ku galeysaa habka ugu wanaagsan.
1 Gawaarida waalan ee Rev Heads Rally
2 Iyada oo wareegyo badan lagu guuleysto
3 Ciyaaryahanno badanna kama maqna, in kasta oo maxalliga ah
Gawaarida waalan ee Rev Heads Rally
Rev Heads Rally waxay u taagan tahay inay na qaadato dhammaan jahwareerka iyo madaddaalada aad rabto ee ciyaarta tartanka arcade taas oo ay tahay inaan si wanaagsan uga taxaddarno cadawga, maxaa yeelay haddii aynaan sidaa yeelin, waxaan hubaal ahaan doonnaa inaan ku dhammaan doonno baabuurkeenna isboortiga godka si wanaagsan dabku u gubay.
Waana in Rev Heads Rally waa inaan si sax ah u isticmaalnaa dhammaan noocyada xirfadaha sida gantaalaha iswada, kuwa aan ahayn iyo dabinnadaas dilaaga ah, sida miinooyinka, oo aan cagaha ugu ridi karno ciid si aan ugu guuleysano guusha kama dambaysta ah.
Muuqaal farsamo oo aad ufiican oo si fiican looga arki karo xakamaynta gaariga iyo sida diyaaradu u furmayso markay xawaare ku soo socoto. Runtu waxay tahay inay taas gaadheen ciyaarta ayaa toban ka dhigeysa in diirada la saaro gebi ahaanba xilliyada arcadada ugu badan ee ciyaarta lagu daabaco Ciyaaraha Isboortiga ee Dukaamada Google Play.
Iyada oo wareegyo badan lagu guuleysto
Marka intaas laga reebo muuqaalka weyn ee xakamaynta gaadiidka Ama maadaama midkani xawaare weyn ku qaadanayo turbo-tuurkaas, sidoo kale wuxuu leeyahay dhiirigelin kale oo weyn waana tiro badan oo wareegyo ah oo aan ku garaaci doonno kuwa naga soo horjeeda. Waa inaan tan sameyno si aan u helno lacag ku filan oo aan ku horumarinno baabuurkeenna si uu awood ugu yeesho inuu u dhaafo, u dhaqaajiyo una xawaareeyo sida ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Wadar ahaan waa 18 raad iyo 3 raad kaas oo lagu abuurayo nooc kasta oo kala duwanaansho ah sidaa awgeedna tartan walbaa waxyar buu kaga duwan yahay kii hore. Sidoo kale waa inaad haysataa koobabka 24 ee taxanaha iyo qaabka xirfadeed ee xaqiiqda la kordhiyay. Haa, waad ku yara jabin kartaa xoogaa Rev Heads Rally iyo qaabkeeda dhabta ah ee la kordhiyay.
Marka laga hadlayo xirfadaha, waxaa jira 7 siyaabood oo kala duwan oo lagu hormariyo tartamada. Hore ayaan uga faallaynay waxyar, sidaa darteed waxaan kugula socodsiinaynaa adiga laftaada. Sidoo kale xusuusnow inaad haysato ilaa 30 baabuur oo casriyeysan iyo 18 astaamo Rev Head oo aad ku raaxeysan karto maalmo badan.
Ciyaaryahanno badanna kama maqna, in kasta oo maxalliga ah
Haddii aad ku jirto isla shabakadda WiFi ee gurigaaga ama goobta saaxiibkaa, ee Rev Heads Rally waxaad ku raaxeysan kartaa habka ciyaartoy badan. Taasi waa, waad awoodi kartaa khiyaano hal tartan midba midka kale si loo sii daayo saliidaas Saaxiibkaaga ka dhig inuu baxo ama uu bilaabo mashruucan la faray inuu ku burburiyo booskiisa koowaad ee tartanka.
Mid ka mid ah tayada ugu weyn ee Rev Heads Rally waa tirada badan ee ay ka kooban tahay iyo hababkaas kala duwan, maaddaama aad ka bixi kartid Waqtiga Tijaabada illaa nidaam hawlgal oo dalbanaya oo tijaabin doona aqoontaada gadaasheeda.
Rev Heads Rally waa ciyaar sifiican looga fiirsaday taas yaqaan sida loo garaaco furaha daqiiqada ugu horeysa in aan bilowno tartan maadaama uu dareemayo sidii ciyaar dhacday. Inta soo hartay waa sawiradeeda wanaagsan, jilayaal si wanaagsan loo qaabeeyay oo fiican, saameyn gaar ah oo si fiican loo fuliyay iyo awood u helida dareenka ah inaan si dhakhso leh ula soconno gaarigayaga waalan.
Nooc adag, sida tartanka iyo leh nooc kale oo arcade ah, Rev Heads Rally waa layaab lagu farxo ciyaar tayo sare leh oo ku lug leh oo ka maqan kaliya ciyaartoy badan oo khadka tooska ah ku ciyaara. Hadda waad la wadaagi kartaa asxaabtaada si ay isugu soo baxaan Kirismaska ​​soo socda oo aad waqti fiican u hesho.
Waxyaabo badan oo lagu raaxeysto
Hawlgal farsamo oo weyn
Ciyaaryahanno badan oo maxalli ah
Looma habeynin 18: 9 bandhigyo
Developer: Ciyaaraha Isboortiga Pty Ltd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » Gawaarida waalan ee Rev Heads Rally tartanka arcade